Ny sensor SOILTECH dia manome angon-drakitra momba ny fijinjana - Potato System Magazine
в Vaovao momba an'izao tontolo izao, siansa, vaovao, Vaovaon'ny orinasa, Tekinika / teknolojia, tontolo iainana
Ehsan Soltan, tompon'ny fifandraisandavitra an'ny Soltan, dia nahita fomba hampiharana ny traikefany sy ny fahaizany amin'ny famahana ny olan'ny fambolena tena izy. Namorona sensor sensor hamandoana tsy misy tariby izy. Taloha dia tsy maintsy nitondra santionany tany amin’ny laboratoara ny tantsaha mba handaminana ny fanondrahana. Ny hevitr'i Soltan dia hahatonga ireo olana ireo ho toy ny zavatra taloha.
Efa nanandrana safidy sensor maromaro niaraka tamin'ireo mpamboly ovy izy, izay nanampy azy hanamarina ny famolavolan'ilay fitaovana sy hanome valiny tsara.
Taorian'ny fitsapana voalohany tamin'ny mpanonta 3D, sensor 50 no novokarina ho an'ny tantsaha dimy. Taorian'ny fanandramana voalohany dia nanapa-kevitra ny hampitaovana ny fitaovana miaraka amin'ny accelerometer sy ny GPS fanilo. Toy izany no nivoahan'ny sensor Soiltech ho fitaovana maoderina maoderina.
Apetraka amin’ny tany miaraka amin’ny tubers izany rehefa mamboly. Tsy ilaina ny fanamboarana sarotra manokana na fisoratana anarana karatra SIM. Ny angona dia voarakitra sy ampitaina amin'ny alalan'ny rahona. Izy ireo dia azo jerena amin'ny fampiharana an-telefaona sy amin'ny sehatra tranonkala mandritra ny vanim-potoanan'ny fitomboana. Voarakitra an-tsoratra ihany koa ny angon-drakitra mandritra ny fijinjana sy ny fitaterana ny vokatra.
Ny sensor Soiltech dia mampiasa ny teknolojia LTE CAT-M1, izay manome ny halavirana lava kokoa sy ny fivoahana avo lenta. Ny famantarana avy amin'ny fitaovana dia ampitaina amin'ny alàlan'ny tany sy ny zavamaniry mampiasa tilikambo sela misy. Ny fitaovana hafa mila fanitsiana sy calibration matetika dia tsy azo ampiasaina raha tsy efa mihalehibe, Soiltech dia manomboka manangona angon-drakitra manomboka amin'ny fotoana fambolena.
Ankehitriny, ankoatry ny saha ovy, ny sensor dia azo ampiasaina amin'ny fambolena tongolo, betiravy siramamy, ovy mamy, alfalfa, ahitra maharitra ho an'ny mololo, vary orza, katsaka, tsaramaso, pastèque ary landihazo. Ny fitaovana dia azo ampiasaina hambolena karazan-javamaniry isan-karazany mandritra ny vanim-potoana maromaro. Soltan dia manoro hevitra ny mpanamboatra hametraka fitaovana marobe amin'ny sehatra iray ihany.
Ny teknolojian'ny data dia miditra tsikelikely ao amin'ny complex agroindustrial. Manampy ny tantsaha hampihena ny fandaniana izy ireo, hampitombo ny tombom-barotra ary hiaro ny natiora.
Tags: ny angon-drakitrasensorhamandoana sensorfandrindrana ny fanondrahana
Nihena ny vidin'ny ovy tany Ukraine, Moldavia ary Belarus.
Manondrana Miloslavsky am-polony taona